यता पनि कमल चलाउने कि ? « News of Nepal
यता पनि कमल चलाउने कि ?
महिलावृन्द खासगरी युवतीका नयन, ओठ, केस, जिउडाल अनि यौवनको बर्णन गरिएका गीतसंगित अहिले ८४ नाघ्या हजुरबा हजुर आमाको अल्लारे उमेरमा थोरै थिए । तर अहिले गीतकार अनि साहित्यकारका कलम पनि महिलाको शिरदेखि अनेक अंग प्रत्यङ्ग र पाऊको प्रशंसा गर्नमै दौडिन्छन् भन्या ।
पप होस या रक, लोक, आधुनिक वा अन्य कुनै झ्¥याउरे भाका नै किन नहोस सबै प्रकृतिका गीत संगित युवती, उनका आमा र सासुको सौन्दर्यको प्रशंसामा खर्चिएको पाइन्छ । सायद यस्तै गीतसंगित मात्रै बजारमा विक्ने भएर पो हो कि ? उम्रदैका गीतकार र साहित्यकार नै किन नहुन् सबैको चासो यतै छ ।
साहित्य र गीत संगितमा शब्द जुराउन, फुराउन जति सजिलो हुन्छ महिलाले भोग्ने रजस्वला, गर्भपतन, गर्भावस्ताको परिस्थितीबारे बोल्न सर्जकको हुत्ति नहुँदो रैछ भन्ने कुरा धरहराले बाक्लै देख्छ ।
केही दिन अघि ललितपुरको पाटनमा त्यस्तै दृश्य देखियो । आफूलाई अग्रज सर्जक समेत भन्न रुचाउने शाक्य थरका वडाध्यक्षले धौगल बजारमा भएको महिनावारी प्याड निर्माणबारेको अभिमुखीकरणमा बोल्न अनकनाउँदै विषयलाई अन्यत्र मोडेको देख्दा सो कार्यक्रममा उपस्थित धेरैले उनको असली परिचय बुझ्ने मौका पाए ।
महिलाबारे साहित्य र गीत संगित बनाउन सक्नेले महिलाको बास्तविक पीडाबारे बोल्न किन आनाकानी ग¥या भन्दै धेरैले कानेखुशी गरे । समस्या यस्तो पनि निम्तिन्छ है सर्जकज्यूहरु, त्यसैले यस्ता विषयमा पनि कलम चलाउन ध्यान दिने कि ?